Nezvedu - Maokun Kunze & Export Co, Ltd.
Maokun Kunze & Export Co, Ltd.
Chiono chedu ndechekubvumira munhu wese kunakidzwa nekapu yakanaka yeChina tii!
Iyo kambani inotarisisa kugadzirwa uye kutengeswa kweti chai yakasimbiswa kubva kuEU uye neDhipatimendi rezvekurima reUS, EU yakajairwa Chinese tii uye Kungfu tii inogadzika nemaChinese maitiro.
tsigira hupenyu hwehupenyu hunhu
kukwirira kwehutsanana, inoteedzerwa tii yakanatswa fekitori muuyi, kusanganisira kurongedza musangano, piramidhi tii bhegi OEM musangano, Matcha Kuenda OEM musangano, nezvimwe.
Chitoro chimwe chete
Iyo yakatungamira yeMaokun Import uye Export Co, Ltd.iyo fekitori inosanganisa kutengesa, kugadzira, kutsvagisa nekusimudzira, mateti uye tii. Inogona kupa inotsigira masevhisi tii uye tii rinovira; semuenzaniso, kutenga tiyi sechipo teapot
Pakutanga kwebudiriro yevanhu, midziyo yaive chikamu chakakosha chehupenyu hwevanhu. Mushure mezviuru zvemakore, nekufambira mberi kwehupenyu hwevanhu, takaramba tichigadzira midziyo iyi kuva yakanaka, inoshanda uye isina kusimba.
Tsika yetii yakatanga muHan Dynasty. Kubva ipapo, tii yakave chikamu chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, uye zvakare hupenyu hwezvizvarwa zvevadi vetii, vanonhonga tii uye vanogadzira tii.
Maokun Import & Export Co, Ltd. yaimbove fekitori diki inosanganisa kutengesa, kugadzira, kutsvagisa nekusimudzira, enamel poto netii. Iine nhoroondo yemakore makumi maviri. Nekufamba kwenguva, fekitori yakaenda kupasi pasi pezita reMaokun. Zvino, vatengi vedu vari kuzere nyika, uye isu takagadzira mhando nyowani nyowani yakasanganiswa tii.
Kunze kwezvo, isu zvakare tine yedu yakakwira hutsanana, inoteedzerwa tii yakanatswa fekitori mu wuyi, kusanganisira kurongedza musangano, piramidhi tii bhegi OEM musangano, Matcha Kuenda OEM musangano, nezvimwewo Kune hutano hwevanhu, isu tinogara tichitsigira hupenyu hwehupenyu mafungire, uye kuzvipira kuve mutsigiri uye mutungamiri weiyo organic tii.
Maokun Import & Export Co, Ltd yakavambwa mune yakajeka Jinhua, Zhejiang.
Iyo kambani bulit alaunch ino "inoshamwaridzana nharaunda, effcient uye hunyanzvi"
Iyo kambani haswon "yakanakisa tekinoroji yekuvandudza mubairo" mune yechisere china Brand Mutambo "
Yedu kambani Nhema Tema yakagadzirwa nemakumi maviri nematanhatu ematani nekutengesa madhora zviuru zvishanu
Vakahwina mudunhu mubairo "Zhejiang Zvekurima Sayenzi uye Technology Enterprises", "Inotungamira Masango Enterprises", "Makambani Ekurima Ekurima"
Iyo kambani yaikosheswa seiri rinotungamira bhizinesi mukubatsira varombo
2018 - Yakagadziridzwa tii gadheni manejimendi manejimendi uye yakaunza sainzi mazuvaano manejimendi manejimendi system
Kuvandudza cheni yekutengesa uye yakapfuma yekutengesa ruzivo simbisa sevhisi yedu kune vatengi vedu.
Chimwe Chinhu Chinotyisa Chiri Kuuya
NGATITANZEI KUTAURA NEZVENYU PROJECT
Taura Nesu Kuti Utange
Kwete 29, Guangming Road, Shuxi Street, Wuyi County, Jinhua Guta